မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်ကျွန်တော့်အမြင် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်ကျွန်တော့်အမြင် (၂)
Posted by Sayagyi on May 29, 2010 in 2010/2012/2015 Election, Politics, Issues | 10 comments
ကြည့်ပါ၊ အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲ ့အစည်းတွေ၊ သူတို ့ရဲ ့ပြည်သူတွေကို ကောင်းကောင်း စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်၊ သူတို ့ရဲ ့ဒေသမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးပွားရေး လုပ်နိုင် တယ်၊ အစိုးရနဲ့လည်းသူတို ့လိုချင်တာတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်တယ်၊ အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကို သူတို့လူမျိုးစုတွေကထောက်ခံကြတယ်။ ကျန်တဲ့အစိုးရနဲ ့ငြိမ်းချမ်းရေးမယူတဲ့ဒေသ ကပြည်သူတွေဆိုရင် ဘယ်လောက် ထိဒုက္ခရောက်ကြလဲ ဆိုတာသိကြပါလိမ့်မယ်၊ အထူးပြောပြနေစရာလို မယ်မထင်ပါ။ အခုလည်း ငြိမ်း ချမ်းရေးယူထားတဲ့ အဖွဲ ့အစည်းတွေ အစိုးရနဲ ့ပြဿနာတက်နေတာပဲဆိုပြီးစောဒကတက်လို ့တော့ရ တာပေါ့၊ အဲဒါကလည်း အစိုးရနဲ ့သူတို့ လွန်ဆွဲ ကြတာပဲ။ သူတို ့လိုချင်တာရအောင် လုပ်ယူကြ တာလေ။ သူတို ့ကနှစ်ပေါင်း၄ဝ ကျော်အစိုးရနဲ ့တိုက်လာတာဆိုတော့ အနှစ်၄ဝ ကျော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုတော့ သူတို ့လူမျိုးစုတွေအတွက် ကောင်းမယ့်လမ်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမယူတဲ့ဒေသက ပြည်သူတွေဆိုရင် အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခရောက်ကြလဲ။ အဲဒါကဘာကိုပြလဲ ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ ့အရည်အချင်းကိုပြတယ်။ အခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်သုံးသပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒီအနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို ့ရဲ ့ပြည်သူတွေကအဆင်ပြေပြေနေနိုင်ကြတယ်။ မတူညီတဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုကိုပြတယ်။ အခုပဲကြည့်အမေရိကန်က တောင် မြန်မာပြည်ကိုသူတို ့ရဲမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပေါ်လစီဟာ မအောင်မြင်ဘူး ပြန်လည် သုံးသပ်ရမယ်လို ့ပြောလာကြပြီ။ မြန်မာပြည် သူတွေကိုကြည့်၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ၊ ထို်င်းမှာ ၂သန်း၊ မလေးမှာဆို ၂သိန်း အခြားနိုင်ငံ တွေမှာလည်း အများကြီးပဲ၊ အဲဒီလိုနိုင်ငံတကာ လှည့်ပြီးအလုပ်လုပ် နေရတယ်။ သူတို့တွေဟာ သူတို့မိသားစုကို ထမင်းနပ်မှန်အောင်ကျွေးဖို ့ဆို ပြီးတော့အခြားတိုင်းပြည်မှာ အနှိမ်ခံ အောက်ကျို ့ခံပြီ သူတို ့နိုင်ငံသားတွေမလုပ်ချင်တဲ ့အလုပ်တွေသွားလုပ်ရတယ်၊ မြန်မာတွေဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေ မှာအရမ်းအထင်သေးခံရတယ်။ ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကိုလဲကြည့်ပါ၊ အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ ရေမလာ၊ မီးမရှိ၊ စီးပွားရေးမကောင်း၊ အဲဒီတော့စားစရာမရှိ၊ အထည်ချုပ်ကမိန်းကလေးတွေဆိုရင် အနှိပ်ခန်း ရောက်၊ အခြေအနေပိုဆိုးတဲ့သူတွေကဖာသည်ဖြစ်၊ ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင် အရက်သမားဖြစ်၊ ခိုးဆိုးလုယက် သူတွေဖြစ်၊ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်ကြလဲ။ အဲဒါအစိုးရမကောင်းလို ့ပေါ့၊ ငါတို ့တွေ အစိုးရကိုတိုက်နေတာအဲဒါတွေကြောင့်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ NLD နဲ့တချို ့ကပြောလာရင် ဘယ်မှာလဲရလဒ်၊ ဒီအစိုးရကအရင်ကတည်းကဒီအတို်င်းပဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ လာမလိမ်နဲ့လို့ပြန်မေးရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ငါတို ့တွေထောင်ကျ၊ သေကျ၊ အနစ်နာခံနေတာမတွေ ့ဘူးလားလို ့မေးရင်တော့ နံရံ ကိုခေါင်းနဲ ့ဘာလို ့တိုက်တာလဲလို ့ပြန်မေးရမှာပဲ။ နံရံကိုခေါင်းနဲ့တိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ ရွေး စရာလမ်းမရှိဘူး။ ပြည်သူအများစုက အစိုးရနဲ့NLD တို ့ရဲ့တိုက်ပွဲက မြေဇာပင် တွေပဲ။
ကျွန်တော်တခုသိချင်တာက NLD ရော၊ ထောင်ကျနေတဲ့ မင်းကိုနိုင်တို ့လိုကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်တွေက ရွေးကောက်ပွဲ ကိုလက်ခံမယ်ဆိုပြီးပြောရင် အစိုးရဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာပဲ။ အစိုးရ ကအဲဒီလို လက်ခံမှာကိုမလိုလားဘူး။ အခုတော့ အစိိုးရလိုချင်တဲ့လမ်းကို NLD နဲ ့ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေလိုက်နေကြတာပဲ။ တခုမှလုပ်လို ့မ၇ရင်ဆန် ့ကျင်ဘက်လမ်းကိုလုပ်ကြည့်ရမယ်။ နာဂစ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုကူညီကြတဲ့အဖွဲ ့အစည်းတွေကိုပဲကြည့်ကြပါ၊ အစိုးရကဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီတာနှောင့်နှေးတော့ အဖွဲ ့အစည်းတွေ အသီးသီးက သွားကူညီ ကြတယ်၊ အစကသွားကူညီ တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေကြတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး၊ သတင်းတွေမှာ ဓါတ်ပုံ တွေနဲ့အစိုးရက ဘာမှမလုပ် ပေးဘူး၊ ကူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အစိုးရကဖြတ်ယူတယ်ဆိုပြီး တော့ပါလာ တော့ အစိုးရကကူညီတဲ့သူ တွေကို စတင်ကန် ့သတ်တယ်၊ အဲဒီဒေသကိုမသွားရဘူး၊ အကူအညီ တွေကိုသူတို ့ကိုပေးသူတို့ဖြန့် ဖြူးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်လာတယ်။ သတင်းဖြန် ့တဲ့သူတွေကရော အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေကပါ အစိုးရကို သိက္ခာကြအောင် အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ဖို ့အခွင့် အရေး ပဲဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ရောအဖက်ဖက်ကပါ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခ ရောက်နေတာကိုမေ့ပြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ဝိုင်းတိုက်ကြတယ်။ ကူညီတဲ့ အဖွဲ ့အစည်းတွေကလည်း သူတို ့ကိုယ်တိုင် ဖြန့်ချင်တယ် ဆိုတော့ ကူညီမှုတွေရပ်သွားတယ်။ အချို့အဖွဲ ့အစည်းတွေက နောက်ဆုတ်သွားကြပြီး အစိုးရကို အပြစ်တင် တယ်။ အဲဒီ တော့ ဘယ်သူတွေ ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ အဲဒီဒေသကပြည်သူတွေပဲ ပိုဒုက္ခရောက် ကြရတယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ အစိုးရကိုလိုက်လျှောပြီး အစိုးရနဲ့ပြေလည်ပြီး ကူညီခွင့်ရအောင် ကြိုးစားကြတဲ့ NGO တွေ၊ အဖွဲ ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့အဲဒီလိုမကြိုးစားရင် ဒုက္ခရောက် ပြည်သူတွေ အခြေအနေပိုဆိုးမယ်ဆိုတာကို မြင်ကြတယ်။ အဲဒီ NGO တွေ၊ အဖွဲ ့အစည်းတွေ ရဲ့ရပ်တည်ချက်၊ ရည် ်ရွယ်ချက်ကရှင်းလင်းတယ်ပြတ်သားတယ်၊ သူတို ့တွေရဲ ့အဓိကလုပ်ငန်းသည် ဒုက္ခရောက်ဒေသ ကလူထုကို ကူညီဖို ့လာတယ်၊ အစိုးရနဲ ့အတိုက်အခံလုပ်ဖို ့လာတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပဲ။ သူတို့တွေက သူတို ့တွေရဲ ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် အစိုးရနဲ့ ပြေလည်အောင်နေပြီး လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ သူတို့ ၁၀ဝ ဖိုးကူညီလို့၁ဝ ဖိုးပြည်သူတွေဆီရောက် တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတဲ့ သူတို့ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်။ အဲဒါကတချို ့အဖွဲ ့အစည်းတွေရဲ့ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ကြတဲ ့နည်းလမ်းတွေပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီ ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ကိုချီးကျူးတယ်၊ အဲဒါမှ တကယ့်သတ္တိ၊ မှန်ကန်တဲ့စွန် ့လွှတ်မှုု၊ အနစ်နာခံမှု လို့မြင်တယ်။ သူတို့တွေ သာအဲဒီလိုမလုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် အဲဒီဒေသကလူတွေဘယ်လောက် အခြေအနေ ဆိုးမယ်ဆိုတာ မစဉ်း စားရဲစရာပဲ။ အခုထက်ထိလည်း အဲဒီအဖွဲ ့အစည်းတွေဟာ ဒုက္ခရောက် ဒေသကလူထုကို ဆက်လက် ကူညီ နေကြတုန်းပဲ။ ဒါက အဖွဲ ့အစည်းရဲ ့ဦးတည်ချက်က အခြေအနေ အရ အချိန်အခါအရ မပြောင်း လဲဘူးဆိုတာကိုပြတယ်၊ နည်းလမ်းသာပြောင်းသွားတယ်။ ဘယ်လိုအ ခြေအနေရောက်ရောက် သူတို ့ရဲ ့ဦးတည်ချက်ကို နည်းလမ်းပြောင်းပြီးရောက်အောင် သွားနိုင်တာက အောင်မြင်တဲ့အဖွဲ ့အစည်းပဲ။
NLD နဲ ့အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတွေကို ကြည့်ရင်သူတို ့တွေဟာအစိုးရနဲ ့တိုက်ခိုက်ရင်း မူလဦးတည် ချက်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူကောင်းစားရေး နဲ့ဝေးကွာလာတာကိုတွေ ့ရတယ်။ ၁၉၈၈အရေး အခင်းက မဆလစနစ်ကြောင့် ပြည်သူတွေမွဲတေ၊ဒုက္ခရောက်ကျတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကို အခြေခံတယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်သူအများစု ကောင်းစား ရေးပဲ။ အဲဒီတော့အဖွဲ ့အစည်းတွေကလည်း အဲဒါဆိုရင် ပါတီစုံစနစ်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပါတီစုံစနစ်ကိုဦးတည်ကြတယ်။ အဲဒီမှာNLD အပါအဝင်အဖွဲ ့အ စည်းတွေအားလုံး ဦးတည်ချက်လွဲကြတော့တာပဲ။ ဒီမိုကရေဒီရရှိရေး၊ (ပါတီစုံစနစ်ရရှိရေး) က နံပါတ်တစ်ဦးတည်ချက်ဖြစ်သွားပြီး၊ NLD ပါတီအာဏာရရှိရေးကဒုတိယဖြစ်ကာ၊ ပြည်သူတွေ ကောင်း စားရေးကနောက်ဆုံးရောက်သွားတာပဲ။ အစိုးရမှာလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ၊သူတို ့ရဲ့ ဦးတည် ချက်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကောင်းစားအောင်လုပ်ပေးပြီး NLD နဲ့ဆန့်ကျင်သူတွေကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်ပြီး သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးကိုလုပ်နေရာကနေ၊ NLDနဲ ့ဆန် ့ကျင်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းရင်း ပြည်သူ ကောင်းစားရေးကနောက်ရောက်သွားပြီး သူတို ့အာဏာရရှိရေးကရှေ့ရောက်လာတယ်။ အဲဒီတော့ ခံရ တာက ပြည်သူတွေပဲပေါ့။ သေချာ တာကတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ပြည်သူကောင်းစားရေး ကနောက် ရောက်နေတယ်ဆိုတာပဲ။ အစိုးရကလည်း NLDအပါအဝင်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုအရင်ရှင်းပြီးမှ ပြည်သူ တွေအတွက်လုပ်မယ်၊ NLDအပါအဝင်ဆန့်ကျင်သူတွေကလည်း အစိုးရပြုတ်ချပြီးမှ NLDအာဏာရ ရင်ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဟာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေကမူလဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကောင်းစားရေးမှမဟုတ်ပဲ။ အစိုးရကအာဏာတည်မြဲရေး၊ NLDအပါအဝင်ဆန့်ကျင် သူတွေကဒီမိုကရေစီရရှိရေးနဲ ့အာဏာရရှိရေးက ရှေ့ရောက်နေတာတွေ ့ရ တယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီကြားကာလမှာတော့ ပြည်သူတွေ ခံကြ ကွာလို ့ပြောနေကြသလိုပဲ။ ပြည်သူ ကောင်းစားရေးနဲ ့ဒီမိုကရေစီကသီးခြားစီဆိုတာကိုမကွဲပြားကြဘူး။ ဒီမိုကရေစီမရှိပဲ ပြည်သူကောင်း စားရေးလုပ်လို ့ရတယ်ဆိုတာမမြင်ကြတော့ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ၇ရင် ပြည်သူတွေအလိုလိုကောင်းစားမယ် ဆိုပြီးပြောလာကြတယ်။ တရုတ် နဲ့ဗီယက်နမ် အစိုးရတွေက တစ်ပါတီစနစ်ပဲ၊ သူတို့ပြည်သူတွေ ကောင်းစားနေကြပြီ။ စင်ကာပူ၊ ရုရှ ကလည်းပါတီစုံသာဆိုတယ် အတိုက်အခံတွေကို နှိပ်ကွပ်ထားပြီး သူတို ့ပဲအာဏာရအောင်လုပ်ထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပြည်သူ တွေကိုလည်း အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားကြတယ်။ အစိုးရရော၊ NLDအပါအဝင်အစိုးရဆန် ့ကျင်သူတွေပါ အဓိကဦးတည် ရမှာကပြည်သူအများစုကောင်းစားရေးပဲ။ နည်းနည်းကောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ များများကောင်းတာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကိုပဲ ရည်ရွယ်ရမယ်။ အစိုးရကတော့ လက်ရှိအာဏာ ရှိတဲ့အတွက်လျှော့ပေးမှာ မဟုတ် ဘူး၊ သူတို ့ကိုဆန် ့ကျင်သူတွေကို ဘာမှလုပ်လို ့မရအောင် လုပ်ပြစ် ထားတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ NLD နဲ ့အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ ့ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့မပါးနပ်မှု ကြောင့်၊ မိမိတို ့ရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေကိုကောင်းကောင်း မသုံးသပ် နိုင်တာကြောင့်ပဲ။ အဲဒီလိုသာအ ခြေအနေမှန်ဖြစ်တဲ ့အစိုးရ ကဘယ်တော့မှသူတို ့လိုချင်သလိုလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုမြင်မယ် ဆိုရင် အစိုးရနဲ ့လိုက် လျောညီထွေ အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံပြီး သူတို ့ပေးတာလေးပဲယူပြီး အပြု သဘောလုပ်ဆောင်ရင် ကျွန်တော်တို ့ရဲ ့ပြည်သူတွေမှာ ဒီဒုက္ခတွေကနေ အမြန်လွတ်မြောက်မယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်တော် ကတော့ NLD နဲ ့အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတွေကို သိက္ခာတွေကိုဘေးဖယ် ထားပြီးပြည်သူ ့အကျိုးကိုပဲ ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ တခါတည်းနဲ ့အကောင်းဆုံးမလုပ်ပေးနိုင်ရင် တောင် တဖြေးဖြေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ ့ပြော၇ရင် NLD နဲ့ဆန် ့ကျင်သူတွေမှာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူး၊ NLD ကပြည်သူ တွေ အတွက်ဘာမှ မ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးဆိုတဲ့ လမ်းစဉ် အမှားတွေကြောင့်ပဲ။ ဘယ်သူမှန်တယ်၊ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကတော့ အချိန်ကဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုအချိန်က အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အထိတော့ ပြည်သူတွေကိုမစောင့်ခိုင်းပါနဲ့။ အရေး အကြီးဆုံး ကတော့ ကျွန်တော် တို ့ပြည်သူတွေမြန်မြန်ကောင်းစားဖို ့ပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ခေါင်း ဆောင်တွေ အနေနဲ ့အမှန်ကို မြင်ဖို ့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေါ်စုနှင့်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေကိုတော့ အပြစ်မမြင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့ သူတို ့တွေဟာ အစွန်းရောက်တွေရဲ ့အသုံးချခံ ဖြစ်နေလို ့ပဲ။ ဒေါ်စုနှင့်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်တွေကို အကြံပေးချင်တာကတော့ မအောင်မြင်တဲ့ လမ်းစဉ် ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်မယ့်လမ်းတွေကနေထွက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို လက်ငင်းအကျိုး ပြုမယ့် လမ်းစဉ်ကိုပြောင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အခြားအကြောင်းအရာတွေ၊ ပုဂိ္ဂုလ်ရေး ခင်မင်မှုတွေ၊ ပုဂိ္ဂုလ်ရေးလေးစားမှုတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ ကိုမကြည့်ပဲ ပြည်သူ ့အကျိုးတခုတည်းကိုပဲ ကြည့်စေချင် ပါတယ်။ အနစ်နာခံတာ၊ စွန် ့လွှတ်စွန် ့စားတာတွေ တော်လောက်ပါပြီ၊ လက်တွေ ့နိုင်ငံ ရေးကိုလုပ်ဖို ့အချိန်တန်ပါပြီ။ အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်မဲ့ တတိယလူ၊ ဆိုလိုတာကအစိုးရနဲ့ မပတ်သက် သူ၊ အစိုးရကိုလည်းမမုန်းတဲ့သူတွေကို အကြံပေး အဖြစ်ပြောင်းကြပါ၊ အဲဒါမှအကြံ ကောင်းတွေရမှာ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရနဲ ့အပြုသဘောဆက်ဆံပါ၊ အစိုးရ ပေးတာလေးနဲ ့ပဲရအောင်ယူပြီး အဲဒီကနေမှ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါ။ အစိုးရနဲ ့အပြု သဘောဆက်ဆံရင် ပြောခွင့်ဆိုခွင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေလည်း၁၉၉ဝရွေးကောက်ပွဲပြီးခါစလိုမျိုး ပြန်ရလာနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရေး ဆိုပြီးတော့ အမှားတွေထပ်မလုပ်ဖို ့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း ပြည်သူတွေ လက်ရှိခံစား နေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေ မြန်မြန် လွတ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။
ဒေါ်စုကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မမျှော်တော့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်၊ သူအကျယ်ချုပ်က လွတ်လာတဲ့အချိန် လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူဘာတွေလုပ်မလဲ ဆိုတာပဲ ကြိုသိချင်နေမိတော့တယ်။
ခက်တော့နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကို မဲမပေးနဲ့လို့ စည်းရုံးလို့ ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ မဲပေးတဲ့လူနှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရှိလိမ့်မယ်။ ကြောက်လို့မဲပေးတဲ့လူ နဲ့ ကြိုက်လို့မဲပေးတဲ့သူ။ ဘာကိုကြောက်မလဲ၊ ဘာကို ကြိုက်မလဲဆိုတာကိုပဲ….
NLD and opposition haves to treat all the people as their family member regardless of race or religion or where they live or what do they do. You can read back my discussion starting from “နာဂစ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူတွေကိုကူညီကြတဲ့အဖွဲ ့အစည်းတွေကိုပဲကြည့်ကြပါ၊ ………………သူတို့တွေက သူတို ့တွေရဲ ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် အစိုးရနဲ့ ပြေလည်အောင်နေပြီး လုပ်ဆောင်ကြတယ်။”, how some organizations findaway to relieve people difficulty. All people knew that some donation/supplies were seized by government for their use. But it didn’t help shouting from news and releasing condemnation statement. So what did the government do? Government simply took action by blocking those supplies to reach affected area. Who suffered, government or people in those areas? I was inspired by those organizations who still tried to support those people at that difficult time by cooperating with government because they consider those people as their family member so they desperately tried to findaway and do not care if it is to cooperate with government or not. The same example applied for those arm groups which took peace with government looked only for their people sake, not their dignity, their sacrifice. They simply understand that their children had suffered enough for more than 40 years so they had to accept whatever the government gave during negotiation. They didn’t get all they asked for, but they accepted agreement for their people sake. They don’t want their people to be sacrificed anymore.
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်က မစ္စတာ ဂျင်မ် ဝက်ဘ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပါက ၎င်းအနေဖြင့် တွေ့ဆုံမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီလိုလူမျိုးကို တွေ့စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ် ၊ ဒေါ်စုအနေနဲ့လည်း ဂျင်မ်ဝက်ဘ်ကို တွေ့ဖို့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ် ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူလုပ်နေတာ မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစရာအကြောင်း တခုမှ မရှိဘူး ၊ သူလုပ်နေ တာ Sanctoin တွေဘာတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ ကိစ္စ ၊ ဒီစစ်အစိုးရကို Sanctoin လိုဟာမျိုးနဲ့မှ ကိုင်မထားရင် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဟု ဦးဝင်းတင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
He thinks that sanction is effective. Do you all know Myanmar proverb “ဆင်ပိန်ကျွဲ”? The government is like that but for the poor people, how ????? Why don’t opposition tell all our people that “We, oppositions are sacrificing our life to bring prosperity to you, but don’t know how long will it take. So, cope with poor life for the time being. Though you die, you will get better life in reincarnation.”
Anyway, it is your view and I accept it because we all view from different angles. We will never see the same picture till we see from the same angle. For me, I only see from an angle of people prosperity, not from government or opposition. Thanks for reading, I am not only bad in Myanmar writing but also in English.
ရှေးအခါက ဗာရာဏသီပြည်မှာ မိုးတွေခေါင်တဲ့အခါ ချောင်းကန်မြစ်ချောင်းတွေ ရေခန်းပြီး ရေသတ်သဝါတွေ ဒုက်ခရောက်ကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ တနေ့တော့ မြစ်ကမ်းဘေး လူတယောက်က အိုးကြီးတလုံးထဲရေထည့်ပြီး ရေနွေးအိုးတယ်ပါတယ်။ ရေတွေပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါ ရေနွေးအိုးပေါ်မှာ တုတ်တန်းတခု ထိုးပြီး ထားတယ်ပေါ့..။
ပြီးတော့ ရေနည်းလို့ ဒုက်ခရောက်နေတဲ့ မြစ်ထဲကဂဏန်းတွေကို အဲဒီတုတ်တန်းပေါ်က ဖြတ်လျှောက်ခိုင်းတာပေါ့။ ဟိုဖက်ရောက်တဲ့ဂဏန်းကို သူကရေပေါတဲ့ အင်းအိုင်မှာ သွားလွှတ်ပြီး ကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုပါတယ်။
“ဂဏန်းများကို ကျွန်တော်ကယ်တင်နေသည်..အဲ..အဲ..ကယ်တင်သူကြီး” ဆိုပါစို့..။
ဂဏန်းတွေဟာ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လျှောက်ကြရပေမဲ့ ရေနွေးငွေ ့အပူဒဏ်ကြောင့် အကောင်ငယ်လေးတွေ။ အကောင်လတ်တွေ ရေနွေးအိုးထဲ တော်တော်များများကျ သေကြပါလေရော..။ အောင်မလေး..ဂဏန်းပြုတ်နံ ့လေး..တသင်းသင်းနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့..။
အဲဒီလိုနဲ့…တချိန်တော့…ဂဏန်းတွေအားလုံးထဲမှာ ကျမ်းမာပြီး သန်စွမ်းဟန်ရှိတဲ့ အကောင်ကြီးကြီးဂဏန်းကြီးဖြတ်လျှောက်ရမဲ့အလှည့်ရောက်ပါတယ်။
ဂဏန်းကြီးက အပူဒဏ်ကြံ ့ကြံ့ခံပြီး အိုးရဲ့ ဟိုဖက်အနားစွန်းရောက်အောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သွားပါတော့တယ်..။
“ဂဏန်းကြီး..နင်ကအကောင်ကြီးတယ်….၂ခါလျှောက်” လို့ ပြောလိုက်သတဲ့..။
ဒီပုံပြင်လေး..ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတာပါ။ အသေးစိတ်မမှတ်မိတော့လို့..လိုရင်းပဲ..ဇြည့်အစာသွပ်ပြန်ရေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး…အသေးစိတ်သိသူများ ..တိတိကျကျလေးရေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
တခါနဲ့တခါ.အနှစ် ၂ဝ တောင်မှကြာတာမဟုတ်တာနော…။ အစအဆုံးသာ သေချာဖတ်လိုက်ပါ။
အာဃာတ တွေထက် ပြေလည်နိုင်ရေး ကို ရှေ့ရှု ဖို့မေ့နေကြတာပါ။
အဲဒီ အာဃာတ စကားကြောင့်ပဲ ပြဿနာ က ၉ဝခုနှစ်မှာတင် မပြေမလည် ဖြစ်သွားတာပါ။
လူပြိန်းကြိုက်စကား လူကြိုက်များမယ့် စကားပြောရတာ လွယ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားတွေရဲ့နောက်ဆက်အကျိုးက ခံစားရခက်လွန်းတယ်။
ကျေးဇူးတင်စကား လှမ်းမပြောပဲ မနူးမနပ် အဘိုးကြီးတွေက ရန်စကား ထပြောလို့ အားလုံး ခွေးဖြစ်နေရတာ။
အခုတော့ ရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ ညှိမရတော့ပါဘူး။ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အာဃာတ ပါ။